हरेक नेपालीले सोच्नै पर्ने विषय हो– देश किन बनेन ?
हरेक संचेतन बर्ग, नागरिक समाज, थिङ्क टेंकहरुले खोज्नैपर्छ देश नबन्नुको कारण । अहिले पनि देश किन बनेन भनेर कारण पत्ता लागेन र सच्याउनतिर शासन व्यवस्थामा सुधार भएन भने नेपालको दुर्गति झन झन बढेर जानेछ ।
पञ्चायतले भएन भनेर बहुदल ल्याइयो, १२ बर्षे कुशासन बेहोर्नुप¥यो । त्यसपछि शाही शासन आएको थियो, दलहरुले जनता उठाएर बिरोध चर्काए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनकारी मिलेर लोकतन्त्र ल्याएको हो । यो तन्त्रमा आमनागरिकको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको थियो । जनताका अनेक अपेक्षा थिए ।
तर जनताका कुनै आशा र अपेक्षा पूरा भएनन् । लोकतन्त्र आयो, कौवालाई बेल पाकेजस्तोमात्र भयो । जनताले पाउनुसम्मको कष्ट पाए, दुःख भोगे ।
देशको शासन व्यवस्थाको नाम लोकतन्त्र रह्यो, लोकतन्त्रका कुनै गरिमा र महिमा बचेनन् । लोकतन्त्रको सम्मान राख्न नेतृत्व असफल भयो ।
यसकारण पनि देश किन बनेन ? अव कारण खोज्नुपर्छ । समय अकारणमा खर्च भइरहेका छन् र देश र जनता दिनदिनै कमजोर हुनेक्रम जारी छ । जनतालाई पार्टीहरुले ढाँट्नुसम्म ढाँटे । आफैले कबुल गरेका बाचा र घोषणापत्रलाई पनि रद्दीको टोकरीमा फाले । जनताको मतको दुरुपयोगमात्र भयो ।
हरेकपल्ट पार्टी र नेताको चिप्लो कुरामा जनता चिप्लिने र मतदान गर्ने अनि पार्टीले जनताको मतको मनपरी गर्ने । बारम्बार जनमत खेर जान सक्दैन । अव यस्तो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । २०४६ सालपछि झण्डै ३ दर्जन सरकार बने, नेपाल बनेन । सरकारमात्र बन्ने र देश नबन्ने हो भने सरकार किन बनाइरहने ?
प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेरेर अव जनता थाकिसके । उसले गर्ला कि उसले ? यस्तो आशावादी हुँदा हुँदा जनता थकित भएका छन् । जनता फेरि आन्दोलन र आँधी बनेर निस्कनु भन्दा नेताहरुले सुधारिनु आवश्यक छ । जनताले फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपरेछ भने आजका नेताहरु कुन किनारमा पुग्लान्, हेक्का राखुन् ।